သင့်ကို လူချစ် လူခင် ပေါစေမယ့် အလွယ်ကူ ဆုံးနည်း (မေတ္တာ ပို့နည်း) – Myanmar Update News
သင့်ကို လူချစ် လူခင် ပေါစေမယ့် အလွယ်ကူ ဆုံးနည်း (မေတ္တာ ပို့နည်း)
သင် နံနက် အိပ်ယာထလို့ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ရေကို စကိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ အဲ့လိုဘဲ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္စာမိ ဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ သံဃံ သရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် ရေနဲ့ တစ်ခါ သပ်ချပါ ..
(ဆိုလိုတာကတော့ မေတ္တာမပို့မှီ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အရင်ရွတ်လိုက်ပါ) အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ သွားတိုက်ချင်တိုက်ပါ သွားတိုက်ရင်း စိတ်ထဲက ဂုဏ်တော် ကိုးပါးကိုရွက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ် ကိုယ်ပြောတဲ့စကား အောင်စေပါတယ် ..
သွားတိုက်ပြီးလို့ ရေကို ထပ်ကိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်ပထမဆုံး – မိမိကိုယ် မိမိဆုတောင်းပါ – ဤရေ အေးမြသလို အကျွနိုပ်လည်း အေးမြပါစေ) မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချပါ အဲ့ဒါပြီးရင် သင်အချစ်ဆုံးသူကို မေတ္တာပို့ပါ (ဤရေ အေးမြသလို ………… လည်း အေးမြပါစေ)
မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါ သပ်ချပါ ..ကိုယ်မေတ္တာပို့တဲ့သူရဲ့ မျက်နှာ ကို စိတ်ထဲမှာ မြင်နေရပါမယ် .. ပြီးရင် ကိုယ် မျက်နှာကို သပ်ချတဲ့ရေရဲ့ အေးမျှမှုကို သတိ ပြုရမယ် ပြီးရင် သင့်မိသားစု မိဘများကို မေတ္တာပို့နိုင်ပါတယ် (ဤရေ အေးမြသလို ရှေးရှေးဘဝ များမှ ယခုဘဝ တိုင်အောင် တော်စပ်ခဲ့ဖူးသော အမိအဖ ဆွေမျိုးများအားလုံး အေးမြပါစေ)
မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချပါ ပြီးရင် ကိုယ်အမုန်းဆုံးလူ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတဲ့သူ ကိုယ့်ကိုယ် အမြဲ တမ်း ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူကို မေတ္တာပို့ပါ .. (ဤရေ အေးမြသလို …………. လည်းအေးမြပါစေ) အဲ့လိုလူတွေများရင် အဲ့ဒီလူတွေ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ မျက်နှာ ကိုစိတ်ထဲက မြင်ယောင်ပြီး တစ်ခေါက်ချင်းစီ လုပ်ရပါမယ် …
ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာက သူ့ကို အမှန်တကယ် အေးမြစေလိုတဲ့ စိတ်သူ့ကို အမှန်တကယ် အောင်မြင်ကြီးပွားစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ မေတ္တာပို့မှ ထိရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလူက ကိုယ့်အပေါ် အချိန်တိုင်း ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူ အရမ်းနာကြီး မုန်းတီးအောင် လုပ်ထားဖူးတဲ့ သူဖြစ်ရင်လည်း အဲ့ဒီအချိန်လေး ခဏမှာတော့ခွင့် လွှတ်နားလည်စိတ်နဲ့ မေတ္တာပို့ရမယ် …
အဲ့ဒါဆိုရင် အဲ့လောက် မုန်းတီးနေတဲ့ သူကိုဘယ်လို ခွင့်လွှတ်ရမလဲ မေးလိမ့်မယ်။ ကိုယ် အရမ်းမုန်းတဲ့သူကို အချိန်ခဏတာ အတွက် ခွင့်လွှတ်နည်း ပထမဆုံး မလွဲသာတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်မှာ သူ့နေ ရာမှာ ငါဆိုရင်လည်း လုပ်ချင် လုပ်မိမှာပါလို့ စိတ်ဖြေပြီး ခွင့်လွှတ်ပါ
အဲ့ဒါတွေအားလုံးမှ မရဘူးဆိုရင် ငါဝဋ်ကြွေးရှိလို့ ခံရတာပဲလို့ တွေးပြီး သူ့ကို အပြစ်မမြင် မိအောင်စိတ် ဖြေပြီး ခွင့်လွှတ်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ သင်ရေ ကိုင်ပြီး မျက်နှာသစ်တဲ့ အချိန် ၂ စက္ကန့်လောက် အတွက် သူ့ကို ခွင့်လွှတ်နိုင်မှာပါ ( သေချာပါတယ် .. သင်သူ့ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး မေတ္တာပို့ နိုင်သလောက် သူသင့်အပေါ် ထူးထူးခြားခြား အမြင်ကြည် လာပါလိမ့်မယ် ..
ဒီနေရာမှာ မုန်းတီးနာကျည်းစိတ်နဲ့ ပါးစပ်ကသာ ရွက်နေရင်တော့ဘာမှ ထူးမှာ မဟုတ်ပါဘူး) ကိုယ်အရမ်းမုန်းတဲ့သူကို မေတ္တာပို့ပြီးရင်တော့ နံနက်ခင်း မျက်နှာ သစ်ရင်းမေတ္တာပို့တဲ့အလုပ်ပြီးပါပြီ .. သင့်အတွက် အချိန် ၅ မိနစ်စာလောက်ဘဲလိုပါလိမ့်မယ် .. ဒါကလည်း သင် အမြဲတမ်းမျက်နှာသစ်နေတဲ့ အချိန်ထက်၂ မိနစ်စာလောက်ဘဲ ပိုမှာပါ …
ပထမတော့ မျက်နှာသစ်တိုင်း အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့ သင်မေ့ချင် မေ့မှာပါ .. နောက်ဆိုရင် မျက်နှာသစ်ဖို့ ရေကိုင်လိုက်တာနဲ့ နှုတ်က အလိုလိုသရဏဂုံ သုံးပါးကိုရွက်မိပြီး အလေ့အကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ..
ကျွန်တော် အဲ့ဒီအတိုင်းဘဲ မေတ္တာပို့ဆုတောင်းနေကျ တကယ်လက်တွေ့ပါ .. အခုလက်ရှိ အလုပ်ထဲမှာရော ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော ကျွန်တော် နဲ့ မတည့်တဲ့ပေါင်း သင်းဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေတဲ့ သူရယ်လို့ မရှိပါဘူး လူတော်တော် များများပြော ကြပါတယ် မေတ္တာ ပို့လိုက်မယ် မေတ္တာပို့လိုက်ရ မကောင်းရှိတော့မယ် ဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒါက လူတွေကြားမှာ မကောင်းတဲ့ စကားတစ်ခုလို ဖြစ်နေတာပါ ..
တကယ်တော့ မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာ ကျိမ်စာတိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ရန်မရှိဘဲ အားလုံး အေးချမ်းစေမယ့် တစ်ခု တည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောကြားရင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ မျက်နှာသစ် နည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။
မန္တလေးစာကြည့်တိုက် (ကျနော်မောင်ဇော်ဇော်) ဓမ္မရေချမ်းစင်/ ပန်းနုရောင်-စာပန်းခင်း
(Unicode version ) သငျ့ကို လူခဈြ လူခငျ ပေါစမေယျ့ အလှယျကူ ဆုံးနညျး (မတ်ေတာ ပို့နညျး)
သငျ နံနကျ အိပျယာထလို့ မကျြနှာသဈတော့မယျ ရကေို စကိုငျပွီးဆိုတာနဲ့ဗုဒ်ဓံသရဏံ ဂစ်စာမိဆိုပွီး တဈခါရှတျ မကျြနှာကို ရနေဲ့ တဈခါသပျခြ အဲ့လိုဘဲ ဓမ်မံသရဏံ ဂစ်စာမိ ဆိုပွီး တဈခါရှတျ မကျြနှာကို ရနေဲ့ တဈခါသပျခြ သံဃံ သရဏံ ဂစ်စာမိဆိုပွီး တဈခါရှတျ ရနေဲ့ တဈခါ သပျခပြါ ..
(ဆိုလိုတာကတော့ မတ်ေတာမပို့မှီ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အရငျရှတျလိုကျပါ) အဲ့ဒါပွီးရငျတော့ သှားတိုကျခငျြတိုကျပါ သှားတိုကျရငျး စိတျထဲက ဂုဏျတျော ကိုးပါးကိုရှကျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ ကိုယျပွောတဲ့စကား အောငျစပေါတယျ ..
သှားတိုကျပွီးလို့ ရကေို ထပျကိုငျတဲ့အခြိနျကရြငျပထမဆုံး – မိမိကိုယျ မိမိဆုတောငျးပါ – ဤရေ အေးမွသလို အကြှနိုပျလညျး အေးမွပါစေ) မကျြနှာကို ရနေဲ့ တဈခါသပျခပြါ အဲ့ဒါပွီးရငျ သငျအခဈြဆုံးသူကို မတ်ေတာပို့ပါ (ဤရေ အေးမွသလို ………… လညျး အေးမွပါစေ)
မကျြနှာကို ရနေဲ့ တဈခါ သပျခပြါ ..ကိုယျမတ်ေတာ ပို့တဲ့သူရဲ့ မကျြနှာ ကို စိတျထဲမှာ မွငျနရေပါမယျ .. ပွီးရငျ ကိုယျ မကျြနှာကို သပျခတြဲ့ရရေဲ့ အေးမြှမှုကို သတိ ပွုရမယျ ပွီးရငျ သငျ့မိသားစု မိဘမြားကို မတ်ေတာပို့နိုငျပါတယျ (ဤရေ အေးမွသလို ရှေးရှေးဘဝ မြားမှ ယခုဘဝ တိုငျအောငျ တျောစပျခဲ့ဖူးသော အမိအဖ ဆှမြေိုးမြားအားလုံး အေးမွပါစေ)
မကျြနှာကို ရနေဲ့ တဈခါသပျခပြါ ပွီးရငျ ကိုယျအမုနျးဆုံးလူ ကိုယျ့အပျေါ မကောငျးတဲ့သူ ကိုယျ့ကိုယျ အမွဲ တမျး ဒုက်ခပေးနတေဲ့သူကို မတ်ေတာပို့ပါ .. (ဤရေ အေးမွသလို …………. လညျးအေးမွပါစေ) အဲ့လိုလူတှမြေားရငျ အဲ့ဒီလူတှေ တဈယောကျခငျြးစီရဲ့ မကျြနှာ ကိုစိတျထဲက မွငျယောငျပွီး တဈခေါကျခငျြးစီ လုပျရပါမယျ …
ဒီနရောမှာ အရေးကွီးတာက သူ့ကို အမှနျတ ကယျ အေးမွစလေိုတဲ့ စိတျသူ့ကို အမှနျတကယျ အောငျမွငျကွီးပှားစလေိုတဲ့စိတျနဲ့ မတ်ေတာပို့မှ ထိရောကျမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီလူက ကိုယျ့အပျေါ အခြိနျတိုငျး ဒုက်ခပေးနတေဲ့သူ အရမျးနာကွီး မုနျးတီးအောငျ လုပျထားဖူးတဲ့ သူဖွဈရငျလညျး အဲ့ဒီအခြိနျလေး ခဏမှာတော့ခှငျ့ လှတျနားလညျစိတျနဲ့ မတ်ေတာပို့ရမယျ …
အဲ့ဒါဆိုရငျ အဲ့လောကျ မုနျးတီးနတေဲ့ သူကိုဘယျလို ခှငျ့လှတျရမလဲ မေးလိမျ့မယျ။ ကိုယျ အရမျးမုနျးတဲ့သူကို အခြိနျခဏတာ အတှကျ ခှငျ့လှတျနညျး ပထမဆုံး မလှဲသာတဲ့ အခွအေနေ တဈခုကွောငျ့ဖွဈမှာ သူ့နေ ရာမှာ ငါဆိုရငျလညျး လုပျခငျြ လုပျမိမှာပါလို့ စိတျဖွပွေီး ခှငျ့လှတျပါ
အဲ့ဒါတှအေားလုံးမှ မရဘူးဆိုရငျ ငါဝဋျကွှေးရှိလို့ ခံရတာပဲလို့ တှေးပွီး သူ့ကို အပွဈမမွငျ မိအောငျစိတျ ဖွပွေီး ခှငျ့လှတျပါ။ အဲ့ဒါဆိုရငျတော့ သငျရေ ကိုငျပွီး မကျြနှာသဈတဲ့ အခြိနျ ၂ စက်ကနျ့လောကျ အတှကျ သူ့ကို ခှငျ့လှတျနိုငျမှာပါ ( သခြောပါတယျ .. သငျသူ့ကို ခှငျ့လှတျပွီး မတ်ေတာပို့ နိုငျသလောကျ သူသငျ့အပျေါ ထူးထူးခွားခွား အမွငျကွညျ လာပါလိမျ့မယျ ..
ဒီနရောမှာ မုနျးတီးနာကညျြးစိတျနဲ့ ပါးစပျကသာ ရှကျနရေငျတော့ဘာမှ ထူးမှာ မဟုတျပါဘူး) ကိုယျအရမျးမုနျးတဲ့သူကို မတ်ေတာပို့ပွီးရငျတော့ နံနကျခငျး မကျြနှာ သဈရငျးမတ်ေတာပို့တဲ့အလုပျပွီးပါပွီ .. သငျ့အတှကျ အခြိနျ ၅ မိနဈစာလောကျဘဲလိုပါလိမျ့မယျ .. ဒါကလညျး သငျ အမွဲတမျးမကျြနှာသဈနတေဲ့ အခြိနျထကျ၂ မိနဈစာလောကျဘဲ ပိုမှာပါ …
ပထမတော့ မကျြနှာသဈတိုငျး အဲ့ဒါလေးလုပျဖို့ သငျမခေ့ငျြ မမှေ့ာပါ .. နောကျဆိုရငျ မကျြနှာသဈဖို့ ရကေိုငျလိုကျတာနဲ့ နှုတျက အလိုလိုသရဏဂုံ သုံးပါးကိုရှကျမိပွီး အလအေ့ကငျြ့တဈခုလိုဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ ..
ကြှနျတျော အဲ့ဒီအတိုငျးဘဲ မတ်ေတာပို့ဆုတောငျးနကြေ တကယျလကျတှပေ့ါ .. အခုလကျရှိ အလုပျထဲမှာရော ပတျဝနျးကငျြမှာရော ကြှနျတျော နဲ့ မတညျ့တဲ့ပေါငျး သငျးဆကျဆံရေး အဆငျမပွတေဲ့ သူရယျလို့ မရှိပါဘူး လူတျောတျော မြားမြားပွော ကွပါတယျ မတ်ေတာ ပို့လိုကျမယျ မတ်ေတာပို့လိုကျရ မကောငျးရှိတော့မယျ ဆိုပွီးတော့ အဲ့ဒါက လူတှကွေားမှာ မကောငျးတဲ့ စကားတဈခုလို ဖွဈနတောပါ ..
တကယျတော့ မတ်ေတာပို့တယျဆိုတာ ကြိမျစာ တိုကျတာ မဟုတျပါဘူး ရနျမရှိဘဲ အားလုံး အေး ခမျြးစမေယျ့ တဈခု တညျးသော နညျးလမျးဖွဈတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး ပွောကွားရငျး ကြှနျတေျာ့ရဲ့ မကျြနှာသဈ နညျးလေးကို ပွနျလညျမြှဝေ လိုကျပါတယျ။
မန်တလေးစာကွညျ့တိုကျ (ကနြျောမောငျဇျောဇျော) ဓမ်မရခေမျြးစငျ/ ပနျးနုရောငျ-စာပနျးခငျး